Expeditions Oceanwide: Ny sambo fitsangantsanganana vaovao m / v Janssonius dia ho vita amin'ny 2021
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny cruise » Expeditions Oceanwide: Ny sambo fitsangantsanganana vaovao m / v Janssonius dia ho vita amin'ny 2021
Jona 21, 2019
Noho ny fahombiazan'ny sambo Polar Class 6 vaovao, Hondius, Oceanwide Expeditions dia nanafatra sambo rahavavy naorin'ilay mpanamboatra iray ihany: M / v Janssonius dia kasaina vitaina amin'ny volana oktobra 2021. Hanana fahaiza-mpandeha mitovy amin'i Hondius izy. (174), habe sy endriny mitovy endrika aminy, ary ho sambo Polar Class 6 mihamafy ranomandry mitovy amin'ny sambo kilasy ranomandry 1A.
Toa an'i Hondius, Janssonius dia ho tonga miaraka amin'ny rafitra mandroso sy fiasa marobe natao ho an'ny dia lavitra azo antoka, haingam-pandeha ary miovaova manerana ny Tendrontany Avaratra, Antarctica, ary ny any atsimo-Antarctic. Hanana faritra arovan'ny Zodiac anaty trano voaaro izy ary azo ampiasaina amin'ny hetsika an-dranomasina toy ny kayak, ary hisy làlambe roa mitokana hanamorana ny asan'ny sambo hatrany amin'ny morontsiraka. Ny mpanosika azy sy ny tsipìkany dia ahafahan'i Janssonius mivezivezy na mijanona tsara foana.
Ny iray amin'ireo birao dia efitrano fandinihana voatokana feno miaraka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny iray hafa izay misy lahateny sy famelabelaran-kevitra mihetsiketsika, mifampiresaka, miteny maro. Misy sokajy kabine marobe koa ho hita ao amin'ny Janssonius: efitrano malalaka, ambony, kambana ary kabine quadruple izay voaravaka tamin'ny fomba maoderina maoderina.
Ny enina amin'ireo suite dia hanana lavarangana. Hisy kabine ambony valo koa misy balconies, kabinetra deluxe 19 kambana, vata fitaratra kambana 14, cabins porthole kambana 31, cabins pompole roa telo ary cabins efatra quadruple.
Hirefy 107 metatra ny halavan'ny sambo, ary 350 metatra (17.6 metatra) ny sakany. Maotera lehibe roa manome hery 58 kW izy ary ahafahan'ny hafaingam-pandeha hatramin'ny 4,200 knot, mitovy amin'i Hondius. Ary toa an'i Hondius ihany koa, ny rafitra fampiroboroboana ny Janssonius dia hampiditra propeller pitch azo ovaina, fitantanana herinaratra malefaka ary mpamokatra herinaratra mifanohitra amin'ny mpamokatra entin'ny diesel. Izany dia hitazona ny Janssonius amin'ny fanjifana solika ambany indrindra sy ny famoahana gazy karbonika azo atao.
Saingy tsy izany irery no mampiavaka ny tontolo iainana an'i Janssonius. Ny sambo dia hampiasa jiro LED anatiny sy ivelany, loko sy hosotra biodegradable, fanafanana etona izay mampiasa herinaratra farafahakeliny ary hafanana fako izay hampiasaina indray amin'ny famokarana rano madio. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ireo mpandeha izay miondrana an-tsambo eo Janssonius dia hiaina ny faritry ny polar araka izay tratra ary hisy fiantraikany kely araka izay tratra.
Tahaka ny ankamaroan'ny sambo ao anaty fiaramanidina, Janssonius dia nomena anarana ho fanomezam-boninahitra mpanao sary hosodoko holandey manan-tantara: Johannes Janssonius (1588-1664) dia mpanamboatra sari-tany ary mpanonta teraka tany amin'ny tanàna holandey, Arnhem, fa nonina sy niasa voalohany tao Amsterdam. Miaraka amin'i Janssonius, reharehanay ny manohy ny fahatsiarovanay ireo olona nanao ny làlana voalohany nahita ny zavatra taloha.
Ny M / v Janssonius dia hatsangana amin'ny alàlan'ny sambo Kroaty Brodosplit, ilay orinasa nanamboatra an'i Hondius, ary hanome fitsangantsanganana an-tsokosoko vaovao any amin'ny faritra rehetra iasanay m / v. Rehefa vita izany, Janssonius dia hiditra amin'ny fianakaviana nautika be dia be izay misy sambo sambo Oceanorder manan-tantara Noorderlicht sy Rembrandt van Rijn ary sambo maotera Plancius, Ortelius, ary mazava ho azy, Hondius.